स्वास्थ्य Archives - Eall Nepal
एजेन्सी– यदि कुनै एउटा खास खानेकुराले मानिसको यौनशक्ति वा यौन आनन्द बढाइदिने प्रमाण फेला परेमा त्यो निकै विक्री हुन्थ्यो होला । सन्तुलित खानपान, सक्रिय जीवनशैली तथा सही मानसिक स्वास्थ्यले तपाइँको यौन जीवन राम्रो बनाइदिन सक्छन् ...
यसले शरीरको तापक्रमलाई सन्तुलनमा राख्दछ र स्वच्छ वायु शरीरमा पुर्‍याउँछ, शरीरमा पसिना किन आउँछ ? शरीरबाट पसिना निस्किनु एक स्वभाबिक प्रक्रिया हो । यसले शरीरको तापक्रमलाई सन्तुलनमा राख्दछ र स्वच्छ वायु शरीरमा पुर्‍याउँछ । पसिनाको ...
कतै तपाई या आफन्तको किड्नीमा समस्या पो आउदै छ ? यसरी बच्नुहोस किड्नी फेलहुनबाट
किडनी मानव शरिरकाे एउटा महत्वपूर्ण अ‌ंग हाे । तर हाम्राे अाफ्नै कारण र हाम्राे खानपाकाे अनियमितताका कारण किड्नी फेल हुने घटनाहरु हिजाअाज सामान्य जस्तै बनेकाे छ । किड्नी फेल हुनु भनेकाे किड्नी खुम्चनु हाे । ...
यास्मिन (नाम परिवर्तन) निकै भाबुक देखिन्छन् । उनी आफ्नो नङ दाँतले लगातार टोकिरहेकी छिन् अनि लगातार मोबाइन चलाइरहेकी छिन् । ‘म यसलाई धोकाका रुपमा मान्छु र यसकारण निकै दुःखी छु ।’- उनले भनिन । हामी ...
हृदयघातका संकेतहरु जानी राख्नुले साँच्चैको ज्यान बचाउँछ। किनकी हृदयघात एक गुप्त हत्यारा हो, कति बेला कसलाई आक्रमण गर्न थाहा हुदैन।शारिरीक कसरतको कमी, पौष्टीक तत्व नपुर्याइ खाने पद्धती अनि अस्तव्यस्त जीवन पद्धतीले हृदयघातको सम्भावना बढाउँछ।छाती गह्रौ ...
उमेर पुगेर पनि चाहेजति स्तनको आकार बढेको छैन भने यसरी चमत्कारिक फाईदा लिन सकिने
स्तनको आकार बृद्धि विकास नहुँदा कयौ महिलाहरू चिन्तित हुने गर्छन् । कोही स्तनको सानो आकार देखेर आफ्नो व्यक्तित्व बृद्धिमा समेत कमजोरी रहेको महशुस गर्छन् भने कोही शारीरिक सुन्दरतामा कमी आएको ठान्छन् । धैरेलाई थाहा नहुन ...
गर्मी मौसम छ, यदी शरिरमा पानीको मात्रा कमी भएमा यस्ता खाले लक्षण देखा पर्दछन, समयमै सचेत बनौ ! हामीलाई शरीरमा पानीको कमी भयो भने विभिन्न समस्याहरु देखा पर्न थाल्छ तर हामीलाई के भएर यस्ता समस्या ...
सुगरको रोगले पिडित हुनुहुन्छ भने अब चिन्ता नलिनुस ! हाम्रै घर वरिपरि पाइने यी पातको प्रयोगले तपाइलाई सुगर रोगबाट मुक्त बनाउन पूर्ण मद्दत गर्नेछ। कसरि प्रयोग गर्ने भन्ने तरिका जान्नु अघि यो सामाग्री पढ्नुहोस् के ...
फ्याटी लिभर अर्थात कलेजोमा बोसो जम्नु । धेरैलाई थाहा हुन्न, आफ्नो कलेजोमा बोसो जमेको । खासगरी अस्वस्थ्यकर खानेकुरा सेवन गर्ने, मदिरा पिउने, मोटोपन भएकाहरुको कलेजोमा बोसो जमेको हुन्छ । शरीरको अतिरिक्त बोसो नै कलेजोमा जम्न ...